Koreana Tatsimo 20 Tapitrisa Iharan’ny Halatra Mombamomba Azy Amin’ny Karatra Fakàm-bola · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Janoary 2014 23:04 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Español, Italiano, русский, English
Sary avy amin'i Don Hankins, mpampiasa Flickr (CC BY 2.0)
Halatra goavana mikasika ny mombamomba ny mpanjifa ary tsy mbola nisy toa azy no nanjo olona 20 tapitrisa tao Korea Atsimo, manodidina ny 2/5 amin'ny vahoaka manontlo ao amin'ny firenena.
“Consultant” iray miasa ho anà orinasa iray, Korea Credit Bureau, mpanasokajy ny resaka fampiasam-bolan'ny tsirairay by a consultant, no nangalatra ireo mombamomba ny mpanjifa ireo, izy izay afaka miditr amin'ny angon-drakitra momba ireo mpanjifan'ireo orinasa telo goavana indrindra mampiasa ny karatra fisintonam-bola ary nivarotra ireo angona ireo taminà orinasa misahana ny varotra amin'ny alàlan'ny finday.
Tena mampivarahntsana ny hadirin'ireo [ko] angona manokana nangalarina: tsy ny zavatra tsotsotra toy ny anarana ihany, na laharana telefona sy laharan'ny fiantohna ara-tsosialy no nalainy, fa koa ireo angona sarpady izay mety hitondra ho any amin'ny fanararaotana henjana, toy ny datin'andro farany azo ampiasàna ilay karatra, ny fidirambola isan-taona, ny momba ny toeram-ponenana, ny fetran-trosa azo alaina, ny tantaran'ny trosa sy ny momba azy. Amin'ny tranga sasany, betsaka efa ho 21 ireomombamomba ny mpanjifa no nangalarina.
Avy hatrany taorian'ilay halatra, tsy hoe fotsiny nandeha nirodorodo [ko] nankany amin'ny zana-tsampan'ilay orinasa namoaka ny karatr'izy ireo tao an-toerana ny olona marobe, fa nizara tao amin'ny Twtter lisitra iray lavabe nisy ny mombamomba azy ireo tratr'ilay halatra, narahan'ny fanehoankevitra feno eso sy ompa ho an'ireo orinasa sy manampahefana:
Anarana, laharan'ny fiantohana ara-tsosialy, laharan'ny karatra, telefona any an-trano, adiresy fonenana, adiresy toeram-piasàna, toerana misy eo amin'ny andraikitra, anarana ofisialin'ny toeram-piasàna, ny mombamomba ny toeram-ponenana, fanontaniana momba ny tenimiafina, fetra farany azo ampiasàna ny karatra, angona momba ny karatra fisintnam-bola nomen'ny ornasa hafa, ny fetran'ny findramam-bola azo alaina, ny kaonty banky mifandray amin'ilay karatra… Ny karazana angona toy izao no nangalarina. Saing mbola miteny ihany ry zareo hoe aza manahy satria farafaharatsiny tsy niharan'ny halatra ny CVC (Card Verification Code) – tarehimarika fanamarinana ny karatra. Tena tiako ho pehana ny totohondry fotsiny izao ny vavan-dry zareo.
@_2on_: Ny anarako, ny laharan'ny fiantohana ara-tsosialy, ny laharan'ny finday, ny telefona ao an-trano sy ny adiresy, ny mombamomba ny toerana iasàko, ny laharan'ny karatro, ny fetra farany iasàn'ilay karatra, ny angona mombaomba ireo fifanakalozana ara-bola, ny fetran-trosa azo angatahana, ny fidiram-bola mandritry ny taona, mailaka, laharako eo amin'ny sehatry ny asa, ny adiresin'ny toera-piasàko, sany nangalarina avokoa[…] Koa nahoana no tsy ho nomenareo hatramin'ny tenimiafina fampiasako?.
Miezaka mifehy ny hatezeran'ny olona ny manampahefana amin'ny alàlan'ny fanindriana mafy fa tsy mbola tonga [ko] any aminà fanararaotana amin'ny endriny samihafa akory ilay halatra, ary andro maro taty aoriana, dia namoaka andianà fepetra fisorohana [ko], ahitàna famaizana henjana ho an'ireo orinasa tratra manao izany (fampitsaharana ny fandraharahany sy sazy henjana ara-bola); famerana ny angona azo tehirizin'ireo orinasa misahana fandraharahana ara-bola hisorohana ny fakàna zavatra tsy ilainy akory sy fivarotany izany amin'ny hafa; fampitomboana ny ora ahazoan'ny mpanjifa mampiasa ny tolotra; ary fetram-potoana ho dimy taona ihany no ahafahana mitahiry ny angona mikasika ny mpanjifa. Tsy maintsy manome toky ireo orinasa mpamoaka ny karatra fa hanonitra feno izay fahaverezana naterak'izany ary hamoaka karatra vaovao indray araka ny fangatahana voarainy. Be no tsy afa-po.
Mila mahafantatra ry zareo ireo fa faran'izay mora ankehitriny ny mitady olona izay tsy nangalarina akory ny mombamomba azy. Famerenana mamoaka karatra ho an'ireo mpanjifa mitaky izany hoe? Raha izay no làlana tena mahomby, dia tokony hosoloin-dry zareo daholo ny karatry ny mpanjifa rehetra, fa tsy ireo izay manao fangatahana ihany akory.
Ny fepetra faran'izay tena tsy lanin'ny vavonin'ny olona nambara dia niteraka dingana iray vaovao fanampiny tamin'ny zotra arahana ho famantarana ny tsirairay, midika ho fanasarotan-javatra bebe kokoa ho an'ny mpanjifa:
Ny orinasa no nanaparitaka ny angona, nefa ny mpanjifa no tsy maintsy mizaka ny vokatry ny zava-nitranga. Mba lojika ahoana re izany. RT @tebica: Milaza fepetra ho fisorohana ny fangalarana ny mombamomba ny tena manokana ankehitriny ry zareo manampahefana, ary iray amin'ireo fepetrany ireo ny “fampidirana dingana iray vaovao fanampiny amin'ny famantarana ny tsirairay refa manao fandraharanana amin'ny alalan'ny karatra”, mampangorintsina ny olona.
Tsy io no voalohany tamin'ny halatra angona teo amin'ny sehatry ny firenena, fa azo antoka kosa ho ny goavana indrindra. Mangataka ny hisian'ny fanavaozana fepetra miainga avy any ifotony ny maro. @leesns, mpampiasa Twitter user, nibitsika hoe:
Efa impiry isika no nahita fangalarana angona momba ny tena manokana? Tsy miasa ara-dalàna ho famantarana ireo mpampiasa azy ny rafitra laharana fiahiana ara-tsosialy amin'izao fotoana, fa lasa fitavana iray aza izay ahafahan'ireo mpanao heloka bevava araraotina mora foana. Tokony haovaozintsika na hofoanana ny rafitra laharana fiahiana ara-tsosialy. Ka averina avoaka daholo indray ny karatra fisintonam-bola ary fanakanana ireo orinasa tsy hivarotra ny mombamomba ny mpanjifany.